Mabhuku manomwe pamashefu ezhizha emashopu | Zvazvino Zvinyorwa
Kumirira nhau dzematsutso, iyo masherufu emabhuku uye zvinoratidzwa muzvitoro zvemabhuku zvakare zviri pazororo rezhizha. Asi pane zviripo uye vanoratidza zvine muto, zvinokwezva kana zvinongedzera mazita kwemazuva ano ekuzorora. Pane izvo zvandakaona mumitsara yekutanga zvimwe kana zvishoma zvave zviri aya manomwe (pakati pevamwe) izvo zvakandiita kuti ndiswedere padhuze.
1 Mumhanzi weGonhere - Ian Rankin
2 Tom Harvey's Strange Zhizha - Mikel Santiago
3 Mukadzi ari muCabin 10 - Ruth Ware
4 Imba yeAlfabheti - Jussi Adler-Olsen
5 Musikana ari muFog - Donato Carrisi
6 Moto - Joe Chikomo
7 Imbwa dzinorara - Juan Madrid
Mhoro mushe - Ian Rankin
Yakave yakaburitswazve pa zita regumi nemanomwe of the Inspector John Rebus akateedzana, iyo yakabuda muna 2008.
Iyi nhoroondo inotitora kuenda kune imwe nyowani muElinburgh uye Rebus yave kuda kuenda pamudyandigere, asi iwe unoda kuyedza kuvhara chero yedzakamirira kesi dzawakasiya. Ipapo zvinoratidzika mudetembi wechidiki wechiRussia akafa, anoratidzika kunge akabatwa nechisimba chisina kufamba zvakanaka. Sezvineiwo kune veRussia vekutengeserana nhume vanoshanyira guta kubhizinesi uye vezvematongerwo enyika nemabhangi vanoda izvozvo nyaya inojekeswa nekukurumidza sezvazvinogona.
Rebus newaanoshanda naye, Sajeni Siobhan Clarke, vanosvika kwazviri, asi kana paine kuuraya kutsva, vanofungidzira kuti kune zvimwe zvakawanda shure kwayo. Pamusoro pazvo, munhu waunoziva tsotsi Edinburgh inotambura a kushungurudzwa zvine utsinye uye zvese zvinoona zviri kunongedzera kuRebus. Saka basa rako rekurega basa rinogona kuva nemhedzisiro inorwadza.
Zhizha raTom Harvey - Mikel Santiago
Pashure Husiku hwekupedzisira kuTremore Beach (2014) uye Nzira yakaipa (2015) yadzoka munyori akabudirira weBasque nenyaya iyi inovimbisa kubudirira kutsva mune rake basa.
Una kukurumidza kufonera kuti protagonist, muRoma uye yakanyatsoperekedzwa, inoita kuti iridze uye haina kupindura. Asi mazuva maviri gare gare anodzidza kuti chero akamudana yakanga yadonha kubva pavheranda kubva kuimba yake muTremonte maminetsi mashoma mushure mekufona. Saka protagonist anozofunga kuenda ikoko onoona zvaitika.
Mukadzi ari muCabin 10 - Ruth Ware
Uyu Munyori weBritish akava nemukurumbira neruzivo rwake rwekutanga rwakaburitswa kuSpain gore rino futi, Musango rine rima. Iyi ndiyo nhoroondo yake yechipiri.
Laura Blacklock mutori wenhau wechidiki izvo hazvisi kupfuura panguva yayo yakanakisa. Iko kukokwa kuchikepe umbozha hunoratidzika kuva chiroto chinoitika. Nezverwendo rwacho uye nekukwanisa kukwiza mafudzi nevanhu vane simba vaigona kumubatsira kutungamidza basa rake. Uye rwendo rwacho rwuri kufamba mushe kusvika, humwe husiku, Laura anomuka nekuda kwe mhere inotyisa wobva watarisa kuti iyo muviri wemukadzi inowira mugungwa kubva kune yakabatana kabhini.
Nokuzivisa vashandi, vanokuvimbisa izvozvo kabhini nhamba 10 yagara isina chinhu uye kuti hapana asipo mutakurwi muchikepe. Laura anoziva kuti hapana anomutenda uye chakanyanya kushata ndechekuti vacharamba vachienderera mberi zviitiko zvinoshamisa izvo zvinoita kuti ave nechokwadi chekuti anogona kuve anotevera nyajambwa.
Imba yezvinyorwa - Jussi Adler-Olsen
Yakabuda iri muhomwe edition yokutanga yokufungidzira wemunyori uyu anokudzwa weDanish, anotungamira nhevedzano yeiyo Dhipatimendi Q. Yakanga yatove yakatengesa zvakanyanya muzuva rayo uye ikozvino yauya pano.
Iyo yakaiswa mu Hondo Yenyika Yechipiri, muna Ndira 1941. Vaviri veRAF vatyairishamwari dzehucheche dzinopfurwa pasi dzichibhururuka pamusoro penyika yevavengi. Ivo vanokwanisa kutiza uye kukwira chitima chinotakura varwi vanorwara nepfungwa. Kana vawana mahofisi akati wandei afa mune imwe yengoro havazeze kudhonza vaviri vavo muchitima votora nzvimbo dzavo.
Panguva yekusvika kune iyo Alphabet House, chipatara chepfungwa pakati peGerman, vanosarudza kunyepedzera sevanopenga kurarama. Mubvunzo ndewekuti riinhi ivo vachakwanisa kuzviita vasina kunyatso kuvhiringidzwa. Kana kuti ndivo vega vari kunyepedzera.
Musikana ari mumhute - Donato Carrisi
Carrisi anodzoka aine zita iri kunzvimbo yekunyora yakamuunzira budiriro zhinji. Munyori we Muvhimi werima, inozova nhepfenyuro yeterevhizheni, yakaburitsa, pakati pevamwe, Dare remweya, Iyo yakaipa hypothesis y Mapere.
La kutsakatika kwemusikana mumusha wemakomo kuchinaya uye foggy ine zvikonzero zvese zvekukwezva iyo mhizha, anogara aine nzara yekufungidzira. Nharaunda yese inokodzera kugadzira kusava nechokwadi, all fungidziro uye kufudza chakawanda chechikara icho chinofungidzira uye chakakomberedza zvese.
Fuego - Joe Chikomo
Chikomo ndiye munyori wekutyisa uye kufungidzira zvinyorwa zvakaita se Sutu yevakafa, Nyanga o Nosferatu. Fuego Iri kubva gore rapfuura uye ichaendeswa kumafirimu munguva pfupi.
Una hosha inouraya zvikuru Yakapararira kwese kwese pasina anoziva kuti kwakatangira nekupi. Vanomudaidza zviri pamutemo Trichophyton draco inopisa; uye mumugwagwa inozivikanwa shato yeshato, chipfukuto chinoratidzira ganda revaya vane utachiona nemavara matema negoridhe kare uzviise pamoto. Uye hapana mushonga.
Harper Grayson mukoti uye nepamuviri. Akaona mazana evarwere vachipisa ... kana kuti akavaona chipatara chisati chapisa moto. Zvino iwo mamaki anewo iye. Asi Harper achasangana mutorwa asinganzwisisike uyo anofamba-famba pakati pemarara, akapfeka semudzimi wemoto uye zvakare ane mamaki eiyo spore. Zvisinei, haritsvi. Zvakare, zvinoita sekunge ndakadzidza kushandisa moto senhovo kune avo vakaurayiwa ... uye sechombo kurwisa vaurayi.
Imbwa dzakarara - Juan Madrid
Yakabudiswa muna Chivabvu wegore rino uye mairi Juan Madrid inotitora kune izvo nguva dzisina kujeka dzehondo uye yechipiri-yevagari vehondo.
Novel yekunyengerera katatu anotiudza nyaya dze Juan Delforo, mutori wenhau uye munyori uyo, mu 2011, anoenda kune imwe imba muEl Viso kunotora nhaka yemurume waasingazive uye achangobva kufa. Iye murume ndiye Dimas Prado, komisheni, wekare Falangist, uyo aive nehukama munguva yakapfuura nevabereki vaDelforo uye akashanda semumiriri wavo wemumvuri.
En Burgos uye munguva yakapfuura 1938 Dimas Prado ndiye anotungamira iyo kuferefetwa kwekupondwa kwehure mudiki kwazvo pamaoko egyrfalcon kubva kudivi renyika.
Uye gare gare mu Malaga wegore ra1945, baba ve protagonist, Juan Delforo, republican musoja murume akarwa muDziviriro yeMadrid, ndiye kusungwa nekutongwa kufa. Dimas Prado anomureverera achichinjana ruzivo rwakakosha nezve rake ramangwana rezvematongerwo enyika uye anomutendera kusangana nemukadzi wake, Carmen Muñoz, waakange asina kumboburitsa hukama naye.
Iyo mibvunzo ichave yekuziva sei muchengeti aida Juan Delforo kugara nhaka yake nyaya uye ndedzipi chokwadi vanhu vese vanovanza.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Type » Novela » Mabhuku manomwe pamashefu ezvitoro emashizha ezhizha